Mah ta ekkliye :: Login
[Total Subscribers 3] MN_Nepali Siidd mercynova Please log in to subscribe to vasudev's postings.
Mah ta ekkliye Fix Unicode
Send Email to vasudev
vasudev	Please log in to subscribe to vasudev's postings.
Posted on 07-17-12 12:33 PM Reply [Subscribe]	Login in to Rate this Post:0? source: http://www.mysansar.com/2012/07/656/
शंकर अधिकारी प्रकाश दाहालसित मेरो दोहोरो चिनजान थिएन । चिनजान गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि ठानिनँ । एउटै पार्टीमा हुँदा पनि न कहिल्यै हात मिलाइयो न जम्काभेट भयो । प्रचण्डको छोराका रूपमा उनको रवाफबारे सुनेको थिएँ । त्यही व्यक्तिले मेरो जीवनको सबैभन्दा अमूल्य चिज खोस्ला भन्ने के अनुमान थियो र !
बीनाजी चार वर्षअघि मेरो जीवनमा आउनुभयो । हामीबीच ख्यालख्यालमै प्रेम बसेको थियो । मैले साथीहरूमार्फत उहाँलाई चिनेको हुँ । उहाँ मेरो साथीहरूको साथी हुनुहुन्थ्यो । बीनाजी पनि माओवादीकै विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध भएकाले आन्दोलनका क्रममा तथा पार्टीका विभिन्न कार्यक्रममा हाम्रो बारम्बार भेट हुन्थ्यो । दुई/चार भेटसम्म त सामान्य साथीको व्यवहार भयो । तर, विस्तारै आत्मीयता बढेको महसुस गर्न थालेँ । मनमा प्रेमको बिरुवा हुर्किएर झांगिन थाल्यो । मैले उहाँलाई नै जीवनसाथी बनाउने निधो गरेँ । एउटै प्रोफेसनमा भएकाले हाम्रो वैवाहिक सम्बन्ध जम्ला भन्ने आशा थियो । आखिर मैले उहाँलाई प्रेमप्रस्ताव पठाएँ साथीहरूमार्फत । उहाँले तत्कालै स्विकार्नुभएन । केही समय माग्नुभयो । तर, आखिरमा गल्नुभयो र एस भन्नुभयो । बिहेचाहिँ अलि ढिला गर्ने उहाँको सर्त थियो । करिब एक वर्ष प्रेम चल्यो । प्रेमलाई अघि बढाउन त्यति गाह्रो थिएन । पार्टी कामकै सिलसिलामा भेट भइरहन्थ्यो । कहिलेकाहीँ आपसी सहमतिमा अन्यत्रै पनि भेटिन्थ्यो । फोनमा लगातार गफ हुन्थ्यो । भावी जीवनका कल्पना हुन्थे । अन्तत: ०६६ भदौमा हाम्रो बिहे भयो । बिहेपछिको तीन वर्ष ऊर्जाशील थियो भन्छु म । मलाई राजनीतिमा अघि बढाउन उहाँको ठूलो सहयोग रह्यो । उहाँप्रति गुनासो राख्नुपर्ने ठाउँ खासै थिएन । उहाँको चरित्रप्रति शंका गर्नुपर्ने अवस्था पनि कहिल्यै आएन । दुवैजना राजनीतिक कार्यकर्ता भएकाले घर–व्यवहार मिलेर चलाउँथ्यौँ । उहाँ श्रीमतीभन्दा बढी दौंतरीजस्तो लाग्थ्यो । घरधन्दामा मात्रै सीमित भएर बस्न नसक्ने तथा जुनसुकै काम गर्न हिम्मत गर्ने उहाँको स्वभाव मलाई मन पथ्र्यो । हाम्रा बालबच्चा थिएनन् । देशमा राजनीतिक स्थिरता आएपछि मात्र बच्चा पाउने सोच थियो, हामी दुवैको । यसरी जीवन चल्दै थियो ।
Last edited: 17-Jul-12 12:34 PM	View/Share this post only Back to Homepage